Fanahy Masina olona | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Andriamanitra ny ray, ary ny zanaka dia Andriamanitra, ary ny Fanahy Masina dia Andriamanitra, nefa misy iray ihany. Andraso kely, hoy ny olona sasany. «Iray fanampiny iray ary iray mitovitovy refy iray? Mety marina izany cant izany. Tsy mety izany. »
Marina, tsy mandeha izany - ary tsy tokony hatao izany. Andriamanitra tsy zavatra "hampiana." Tsy misy afa-tsy Ilay iray ihany, izay mahery indrindra, hendry ary mahery. Ao amin'ny tontolon'ny Fanahy, ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia miray amin'ny fomba tsy ahafahan'ny zavatra ara-nofo. Miankina amin'ny zavatra ara-nofo ny matematika antsika; tsy miasa foana amin'ny lafiny voafetra sy ara-panahy izy io.
Ny ray dia Andriamanitra ary ny zanaka dia Andriamanitra, nefa misy ny iray ihany, Tsy fianakaviana na komity an'ny zanak'olombelona izany - tsy afaka milaza ny vondrona hoe: "Tsy misy tahaka ahy" (Isaia 43,10; 44,6; 45,5). Andriamanitra dia olona manan-toetra - mihoatra ny olona iray, fa Andriamanitra ihany. Ny Kristiana tany am-boalohany dia tsy nahazo izany hevitra izany tao amin'ny paganisme na ny filozofia - noterena tamim-pahamalinana azy ireo tamin'ny alalan'ny Soratra Masina izy ireo.
Tahaka ny ampianarin'ny Soratra Masina fa masina i Kristy dia mampianatra fa masina sy manokana ny Fanahy Masina. Izay rehetra ataon \_ 'ny Fanahy Masina dia ataon Andriamanitra. Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra, toy ny zanaka sy ny ray - olona telo izay tafaray tanteraka amin'ny Andriamanitra tokana: ny Trinite.
Ny fanontaniana momba ny vavak'i Kristy
Manontany matetika ny fanontaniana hoe: satria iray ihany Andriamanitra (iray) nahoana i Jesosy no tsy maintsy nivavaka tamin'ny Ray? Ao ambadik'io fanontaniana io dia misy ny fiheverana fa ny firaisan'Andriamanitra dia Jesosy (ilay Andriamanitra) tsy navela hivavaka tamin'ny rainy. Iray Andriamanitra. Iza àry no nivavahan'i Jesosy? Ity sary ity dia manadino ireo hevitra manan-danja efatra tokony hataontsika raha tiantsika ny hahazo valiny mahafa-po amin'ilay fanontaniana. Ny teboka voalohany dia ny teny hoe "ny Teny dia Andriamanitra" dia tsy manamafy fa Andriamanitra ihany no Logos [ny Teny]. Ny teny hoe "Andriamanitra" amin'ny fiteny "ary Andriamanitra no teny" (Jaona 1,1) dia tsy ampiasaina amin'ny anarana mety. Midika izany teny izany fa masina ny Logos - fa ny Logos dia mitovy amin'ny Andriamanitra - iray ihany, iray. Diso ny fiheverana fa ny teny hoe "Logos dia Andriamanitra" dia midika fa Andriamanitra irery ny Logos. Raha jerena amin'ity fomba fijery ity, io teny io dia tsy manakana an'i Kristy tsy hivavaka amin'ny Ray. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia misy ny Kristy ary misy ny ray ary tsy misy tsy fifanarahana rehefa mivavaka amin'ny ray i Kristy.
Ny hevitra faharoa tokony hazavaina dia ny hoe tonga nofo ny Logos (Jaona 1,14). Io fanambarana io dia milaza fa ny Logoson'Andriamanitra dia tena lasa olombelona - olona ara-bakiteny ary voafetra, miaraka amin'ireo toetra sy fetrany rehetra izay mampiavaka ny olona. Nanana ny filana rehetra niaraka tamin'ny natiora olombelona izy. Nila sakafo izy mba hivelomana, hanana zavatra ara-panahy sy ara-pihetseham-po izy, anisan'izany ny filana fiarahana amin'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny vavaka. Io zavatra ilaina io dia ho lasa mazava kokoa amin'ireto manaraka ireto.
Ny teboka fahatelo tokony hohazavaina dia ny tsy fahotany. Ny vavaka dia tsy natao ho an'ny mpanota fotsiny; eny, na dia ny olona tsy nanota aza dia afaka midera an'Andriamanitra ary mitady fanampiana. Ny olombelona iray voafetra dia tsy maintsy mivavaka amin'Andriamanitra, tsy maintsy manana firaisana amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy, olombelona olombelona tsy maintsy nivavaka tamin'ilay Andriamanitra tsy manam-petra.
Izany dia mitaky ny fanitsiana ny fahadisoana fahefatra natao tamin'io fotoana io ihany: ny fiheverana fa ilaina ny mivavaka dia porofo fa ny olona mivavaka dia tsy olombelona. Izany fiheverana izany dia niditra tao an-tsain'ny olona maro avy amin'ny fomba fijery mivaingana amin'ny fivavahana - amin'ny fiheverana fa ny tsy fahatomombanan'ny olombelona no hany fototry ny vavaka. Io hevitra io dia tsy avy amin'ny Baiboly na zavatra hafa nambaran'Andriamanitra. Tokony ho nivavaka i Adama na dia tsy nanota. Ny fahotany dia tsy ho nahatonga ny fivavahany ho tsy ilaina. Nivavaka i Kristy na dia lavorary aza izy.
Raha ny eritreritra voalaza etsy ambony dia azo valiana ny fanontaniana. Andriamanitra i Kristy, nefa tsy rainy izy (na ny Fanahy Masina); afaka nivavaka tamin-drainy izy. Kristy dia olombelona koa - olombelona voafetra ary voafetra ara-bakiteny; tsy maintsy nivavaka tamin'ny rainy izy. Kristy koa dia ilay Adama vaovao - ohatra tamin'ny lehilahy tonga lafatra izay tokony ho an'i Adama; nifandray tsy tapaka tamin'Andriamanitra izy. Tsy mihoatra ny olombelona i Kristy - ary ny vavaka dia tsy manova io sata io; Nivavaka toy ny Zanak'Andriamanitra izy, izay tonga olombelona. Ny finoana fa ny vavaka dia tsy mety na tsy ilaina amin'ny olona iray lavitra noho ny olombelona dia tsy avy amin'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra.